Banaanbax ka Dhan ah shirka Dhuusamareeb oo ka dhacay Cadaado? – War La Helaa Talo La Helaa
Taliyaha cusub ee NISA oo xilka la wareegay?
Baarlamaanka Hirshabeelle oo go`aan Adag ka gaaraya Xildhibaanada ka maqan…
AUN Axmed Diiriye Oo Isbaheysiga Janaaso lagula tukaday Iyo Masjidka Oo Arrin Naxdin…
Akhriso:-Gudoomiyihii Degmada Mahadaay Oo Xilka Laga Qaaday
Fiirso:Sh Sheylilaah oo kuqaaday Cod nabi amaan ah oo kuu kordhindoona Jaceelka…
Suuqa Bakaaraha Oo Dib U Furmay Maanta
Maxaa Kheyrre Lagu Maagay Oo Laga Damacsan Yahay?
Xuska Maalinta Afka Hooyo Iyo Muhiimadda Ay Leedahay Ku Dhagnaashaha Dhaqanka
Banaanbax ka Dhan ah shirka Dhuusamareeb oo ka dhacay Cadaado?
By Nuurka Nuurka	 On Jan 18, 2018
Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud maanta oo Khamiis ah ka dhacay Banaanbax looga soo horjeedo shirweynaha Galmudug iyo Ahlusuna ee magaalada Dhuusa-mareeb.
Banaanbaxan oo ka dhacay wadooyinka waa weyn ee magaalada Cadaado ayaa waxaa horkacayay Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Maamulka Galmudug, sida ay inoo sheegeen Wariyeyaasha halkaasi ku sugan.
Sidoo kale Banaanbaxayaasha oo u badnaa Haween iyo caruur ayaa waxa ay wateen boorar waa weyn oo ay ku qornaayeen ereyo ay ka mid yihiin doonimeyno heshiiskii Jabuuti, doonimeyno shirka Dhuusa-mareeb.
Banaanbaxayaasha ayaa heshiiska Dhuusa-mareeb ku sheegaya mid aan caddaalad ahayn, waxaana Odayaasha Cadaado maalmihii la soo dhaafay Madaxweynaha Galmudug ku dhaliilayeen in uu saxiixay heshiis aan loo dhameyn.
Banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in siyaasiyiinta iyo Mas’uuliyiinta Magaalada Cadaado ku matala dowladda Federaalka ah iyo maamulka Galmudug ay tagaan Cadaado si arrintaas wax la isaga weydiiyo.
Xildhibaano Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ka tirsan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Galmudug ayaa shalay gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Cadaado, iyaga oo ka baxay magaalada Dhuusa-mareeb, waxaana ujeedada socdaalkooda ahaa in kulamo xal loogu raadinayo tabashada waxgaradka reer Cadaado ay la qaataan, balse natiijo ayay soo laabteen maanta.
SAWIRRO: DF ah oo la wareegtay Ciidankii Ahlu Sunna?
Fiirso:Fanaanka qaaliga ah C/lahi Shariif Baastoow ee kooxdii Dur Dur ee Barisamaadkii somalia
banadir banka	 Feb 20, 2018 0
Fiirso:Qudbadii Qiimaha badneyd ee Eng:Yariisoow uu kajeediyay Soo…